May 2020 - Nalonetardiary
ပျားရည် စစ်မစစ် ခွဲနည်း
May 31, 2020 by Nalonetar Diary
ပျားရည်အစစ်အတုခွဲနည်းနှင့် ပျားရည်၏အစွမ်း ပျားရည်ဟာ ကျွန်တော်တို့လူသားတွေအတွက်တော့ အကောင်းဆုံးသော အာဟာရတခုဖြစ်သလို အကောင်းဆုံးသော ဆေးတမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပျားရည်ဟာ နှုတ်ကိုမြိန်စေတယ်။ဝမ်းမီးကိုတောက်စေတယ်။ပျို့အန်ခြင်းကိုတားမြစ်တတ်တယ်။ရေငတ်ပြေစေနိုင်တယ်။ခြောက်တတ်စေတယ်။တွန့်ရှုံ့စေတတ်တယ်။သွေးယိုစီးခြင်း၊ဝမ်းသက်ခြင်းကိုပိတ်စေတယ်။ ကြို့ထိုးခြင်းကိုပျောက်စေတယ်။ဝမ်းတွင်းရှိပိုးကို သတ်တတ်တယ်။အေးတယ်။ကြေကျက်လွယ်တယ်။နူးညံ့တယ်။ရသကြောတွင်းသို့ဝင်၍ ရသကြောတို့ကို သုတ်သင်တတ်တယ်။ပျားရည်၏မူလအရသာမှာ ချိုသော်လည်း အဖန်ဓာတ်လည်း အတွင်းမှာကိန်းတယ်။ဒေါသသုံးပါးကို ကင်းစေတယ်။ အချို့အချိန်တွင် ပျားရည်သည် လေကိုပြုတတ်သော်လည်း လေဖောက်ပြန်ရာ၌၎င်း၊ဆောင်းဥတု၌၎င်း၊ပျားရည်ကိုသုံးဆောင်ရမည်။ပျားရည်ကိုသောက်သော် အသံကောင်းတယ်။ကိုယ်နူးညံ့တယ်။အရောင်အဆင်းကို ဖြစ်စေတယ်။သုက်ကိုပွါးစေတယ်။ခွန်အား၊အသိဉာဏ်၊ကာမသတ္တိကိုအားပေးတယ်။ မွတ်သိပ်ခြင်းကင်းစေ၍ နှစ်သက်ခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်။ရောင်ရဲခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်။မျက်စိရောဂါကိုလည်းကောင်းမွန်စေတယ်။ အရက်အလွန်သောက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်တတ်သောရောဂါများ၊တွေဝေခြင်းနှင့် နှလုံးရောဂါများကိုပျောက်ကင်းစေတတ်တယ်။သလိပ်ကိုထုတ်ဆောင်တတ်တယ်။ချောင်းဆိုးနဲ့ပန်းနာတို့၌အကျိုးပြုတယ်။ ပိုးကိုနိုင်ခြင်း၊အဆိပ်ကိုနိုင်ခြင်းကြောင့် အနာများပေါ်မှာလိမ်းကျံပေးသင့်တယ်။အနာများ၌အကြောများပုပ်ခြင်းကို အပြင်သို့ထုတ်ဆောင်တတ်တယ်။အနာများကိုစင်ကြယ်စေ၍ အသားနုတက်စေနိုင်တယ်။အရိုးကျိုးခြင်း၊အသားကွဲခြင်းကို ဆက်စေနိုင်တယ်။ နူနာ၊မြင်းသရိုက်ရောဂါ၊သည်းခြေဖောက်ပြန်ခြင်း၊ပူလောင်ခြင်း၊သွေးဖောက်ပြန်ခြင်း၊သလိပ်ရောဂါ၊ဝလွန်းခြင်း၊တူလာသရောနာ၊ချုပ်ခြင်း၊ခန္ဓာကိုယ်ခြောက်ခြင်း၊ခယရုပ်ရောဂါ၊အဆုပ်ရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်တယ်။ ဤအကျိုးစွမ်းရည်တို့ကို ပျားရည်အစစ်ကသာလျှင် ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ပျားရည်အတုကို အစစ်ထင်ပြီး အသက်ရှည်ဆေး၊အားတိုးဆေး စသောဆေးနည်းတို့မှာထည့်သွင်းပြီး စားသုံးမိရင်တော့ လိုအပ်သောအကျိုးမပြီးပဲ ဘေးဒုက္ခတွေသာရတတ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ဤပျားရည်စစ်မစစ်ခွဲခြားနည်းကို ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ ၁။ပျားရည်ကိုရေအေးဖန်ခွက်တွင်ထည့်ပါ။စုခဲထိုင်နေကစစ်သည်ဟူ၍မှတ်ပါ။သာမန်စုခဲခြင်း၊အရည်ကျဲ၊ပွဖောင်းစုခဲနေခြင်း၊ရေနှင့်ရောသွားခြင်းဖြစ်မူ အတုဟုမှတ်ပါ။ ၂။စက္ကူဖြူဖြူပေါ်တွင်(အပွသား ကောင်း၏)ပျားရည်စက်ကိုချပါ။ပြန့်သွားခြင်း၊အောက်သို့စိမ့်ဝင်သွားခြင်းဖြစ်မူ မစစ်။ ၃။ဒုတ်ချောင်းတွင်ပျားရည်တို့၍မီးရှို့ပါ။မီးတောက်လျှင်အစစ်။မီးအနည်းငယ်တောက်ပီးမှ သေသွားလျှင် အနည်းငယ်သာစစ်သည်။မီးလုံးဝမတောက်လျှင်အတု။ … Read more
Categories Food, Knowledge Tags ပျားရည်
မွ်စ္ကိုႀကိဳက္လို႔သာ စားေနတာ..အခုကစၿပီး အရင္ထက္ပိုၿပီး စားျဖစ္ေအာင္စားရေတာ့မယ္
မျှစ်အကြောင်းကို မသိပဲ ကြိုက်လို့သာ စားနေတာ..အခုကစပြီး အရင်ထက်ပိုစားတော့မယ်…ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ကြည့်လိုက်နော် မြန်မာ လူမျိုးတွေက မျှစ်ကို ကြော်ချက်ပြီး ဟင်းလျာ အမျိုးမျိုး ပြုလုပ် စားသောက် တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မျှစ်တွေကို ဆေးဆိုးထားတယ် ဆိုတဲ့သတင်း ထွက်လာပြီးနောက်မှာ မျှစ်ကို စားဖို့ လက်တွန့် သွားကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆေးမဆိုး ထားတဲ့ မျှစ်တွေကို ရွေးချယ် စားသောက်ဖို့ အကြံပြုရင်း မျှစ်ကြောင့် ရရှိလာနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေး စွမ်းပကားတွေကို ရေးသား လိုက်ရပါတယ်။ (၁) အစာခြေစနစ်ကျန်းမာ ခြင်းမျှစ်ဟာ အစာအိမ်ရဲ့ အစာချေဖျက်တဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ကောင်းမွန်စေ ပါတယ်။ မျှစ်ဟာ အစာအိမ် ဝေဒနာကို သက်သာစေပြီး ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှော ရောဂါကိုလည်း သက်သာစေပါ တယ်။ (၂) နာတာရှည်ရောဂါ … Read more
Categories Food, Hearth Tags မျှစ်အကြောင်
ဆိုင္ကယ္စီးနင္း ေမာင္းႏွင္သူမ်ားသိရွိေစရန္… (2020-ဥပေဒသစ္)
ဆိုင်ကယ်စီးနင်း မောင်းနှင်သူများသိရှိစေရန်… (2020-ဥပဒေသစ်) ယာဉ်နံပါတ်မထင်ရှား =ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၈၄-က) ။ အရေးယူသည့်ပုဒ်မ-၉၄ =ဒဏ်ငွေသုံးသိန်း. ထောင် သုံးလ ။ အခြားနံပါတ်တပ် =ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၈၄-ခ)။ အရေးယူသည့်ပုဒ်မ-၉၄ =ဒဏ်ငွေ သုံးသိန်း.ထောင်သုံးလ။ ယာဉ်နံပါတ်ပြားမတပ်=ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၈၄-ဂ)။ အရေးယူသည့်ပုဒ်မ-၉၄ =ဒဏ်ငွေသုံးသိန်း.ထောင်သုံးလ ။ ဝှီးတက်သက်တမ်းကုန် =ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၈၀)။အရေးယူသည့်ပုဒ်မ-၉၁ =ဒဏ်ငွေတစ်သိန်း.ထောင် တစ်လ။ မောင်းလိုင်စင်မရှိ = ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၈၁-က)။အရေးယူသည့်ပုဒ်မ-၉၁ =ဒဏ်ငွေတစ်သိန်း .ထောင် တစ်လ ။ တခြားသူ၏ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သုံး =ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၈၁-ဂ)။ အရေးယူသည့်ပုဒ်မ-၉၁ ။ဒဏ်ငွေတစ်သိန်း . ထောင် တစ်လ ။ ယာဉ်မဆင်မခြင်မောင်း =ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၈၁-င)၊ အရေးယူသည့်ပုဒ်မ ၉၁ =ဒဏ်ငွေ တစ်သိန်း.ထောင်တစ်လ ။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးအရက်မူးလွန်းမောင်း =ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၈၁-ဇ)။အရေးယူသည့်ပုဒ်မ ၉၁ =ဒဏ်ငွေ တစ်သိန်း .ထောင်တစ်လ မောင်းလိုင်စင်မပါ = ကျုးလွန်းသည့်ပုဒ်မ(၇၅-က)။ … Read more
Categories Knowledge, Local News Tags ဆိုင်ကယ်စီး
မင္းတစ္သက္လုံး ဘယ္ေတာ့မွ မဆင္းရဲေအာင္ ဒါေတြကို တကယ္လုပ္ပါ
ဒါတွေကို တကယ်လုပ်ပါ….မင်းတစ်သက်လုံး ဘယ်တော့မှ မဆင်းရဲစေရဘူး တကယ်ချမ်းသာချင်ရင် ဒါတွေ တကယ်လုပ်ပါ …။ (၁) အလုပ်ဟူသမျှ ဂုဏ်ရှိစွတဲ့ အလုပ်မရွေးပါနဲ့ …။ (၂) ချွေတာစုဆောင်း သူဌေးလောင်းတဲ့ ရသမျှကို အကုန်မသုံးပါနဲ့ စုနိုင်သမျှ စုပါ …။ (၃) အချိန်ဟူသည် အဖိုးတန်ဆုံးသော အရင်းအနှီးတဲ့ အချိန်ကိုမဖြုန်းပါနဲ့ ။ အကြိုးရှိစွာ အသုံးချပါ …။ (၄) ကျမ်းမာခြင်းသည် လာဘ်ကြီးတစ်ပါးတဲ့ ကျမ်းမာရေးကို ဂရုစိုတ်ပါ ။ ကျန်းမာမှ လည်း အလုပ်လုပ်နိုင်မှာပါ …။ (၅) ဝါသနာကို အရင်းခံပြီး အလုပ် လုပ်ပါတဲ့ မိမိဝါသနာ ပါတဲ့ အလုပ်သည်သာလျှင် မိမိအတွက် အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် …။ (၆) အနားယူရင်း စာဖတ်ပါတဲ့ … Read more
Categories Careers, Knowledge Tags မဆင်းရဲစေရဘူး
ဘုရားထဲမှာ ဌာပနာထည့်သွင်းခြင်းရည်ရွယ်ချက် ဘုရားထဲမှာ တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေ ဘာလို့ထည့်သွင်းထားတာတုန်း၊တချို ့လည်းပဲစဉ်းစားချင်မှစဉ်းစားမှာ၊ ဘုရားထဲမှာ ဌာပနာတယ်၊ ဌာပနာဆိုတာ ထည့်သွင်းတာ၊ထည့်သွင်းခြင်း တည်ထားခြင်းလို့အဓိပ္ပါယ်ရတယ်၊ အဲဒီတော့ ရတနာတွေ ဘာကိစ္စဘုရားထဲမှာထည့်ကြတာတုန်း၊နိုင်ငံခြားသားတွေအမြင်နဲ့ကြည့်ရင်တော့ ဒါဟာ အကျိုးမရှိဘူးပြောမှာပေါ့နော်၊ ဒါတွေထည့်လိုက်လို့ဘာအကျိုးရှိမှာတုန်း၊ ဘုရားရုပ်ပွားဆင်းတုတော်ထည့်တာတော့ထားပါတော့၊ ရတနာတွေထည့်တယ်၊ အခုခေတ်လည်းထည့်တာပဲ၊ ကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက ကိုယ့်သဒ္ဒါတရားနဲ့ကိုယ် ထည့်ကြတယ်၊ ဘာအတွက် ထည့်တာလဲဆိုတော့ကြည်ညိုလို့လှူတာပဲသိတယ်။ သို့သော် တကယ့်အစစ်အမှန်ကရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်၊ မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့အခါ ဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်တွေကို ရှစ်ပြည်ထောင်မင်းတွေကိုခွဲဝေပြီးပေးလိုက်တယ်၊ ဓာတ်တော်တွေက ရှစ်ပြည်တောင်ရောက်သွားတယ်၊ ဒီဓာတ်တော်တွေကိုအန္တရာယ် ဖြစ်မှာစိုးလို့ရှင်မဟာကဿပတို့ကအဇာတသတ်မင်းနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ ဓာတ်တော်တိုက်ကြီးတစ်ခုလုပ်ပြီးဓာတ်တော်တွေစုထည့်ထားတယ်၊ အဲဒီလို စုထည့်ထားပြီးအင်မတန်တန်ဖို းရှိတဲ့ပတ္တမြားတစ်လုံးကို အဲဒီထဲမှာထည့်ထားပြီးစာရေးထားတယ်။ “နောင်တစ်ချိန်ကျရင် ဒီဓာတ်တော်တိုက်ကြီးပျက်စီးလို့ပြင်ဆင်ဖို့အတွက် ငွေကြေးမတတ်နိုင်ဘူးဆိုရင် ဒီပတ္တမြားတုံးကြီးကိုရောင်းချပြီးပြင်ပါတဲ့”။ အဲဒီတော့ ရတနာတွေထည့်သွင်းထားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဟာ သင်္ခါရသဘောတရားအရ တစ်နေ့ကျ ပျက်မှာပဲ၊ maintenance လိုတယ်လေ၊ maintenance အတွက်ထည့်ခဲ့တာ၊ ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းတယ်ပေါ့၊ … Read more
Categories Buddha, Knowledge Tags ဘုရားထဲမှာဌာပနာ
ခဏခဏ ေမ့တတ္ေနရင္ ဒီနည္းေလးေတြလုပ္ျကည့္ပါ
ငယ်ငယ်ကလောက် ဉာဏ်မကောင်းတော့ဘဲ မေ့တတ်လာတယ်ဆိုပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်မနေပါနဲ့။ ဦးနှောက်ကလည်း ဓားလိုပဲ သွေးလေ ထွက်လေဆိုတာကို အကုန်သိပြီးကြမှာပါ။ ဒီတော့ မှတ်ဉာဏ်တွေ ကောင်းဖို့အတွက် ဦးနှောက်အတွက် လေ့ကျင့်ခန်းအချို့ လုပ်ပေးရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဒီနည်းလမ်းအချို့ကတော့ (၁) တရားထိုင်ပါ တရားထိုင်တာက စိတ်ကို တည်ငြိမ်အောင် ပြုလုပ်ပြီး အလုပ်လုပ်တဲ့အာရုံတွေကို အနားပေးခြင်း တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ တရားထိုင်ခြင်းကြောင့် စိတ်ကို ပိုတည်ငြိမ်စေပြီး အာရုံစူးစိုက်မှုအားတွေ ပိုကောင်းလာစေပါတယ်။ မှတ်ဉာဏ်စွမ်းရည်ကို မြင့်စေတာမို့ ပုံမှန်လေး ထိုင်ပေးနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့နော်။ (၂) စာအုပ်မှာ ရေးမှတ်ပါ နှစ်ထပ်ရှိမှ မှတ်မိတယ်ဆိုတာ ပြောလေ့ ရှိကြတယ်မလား။ အဲ့သည့်နည်းကလည်း တကယ်အသုံးဝင်တယ်နော်။ လွယ်လွယ်မှတ်လိုက် မေ့လိုက် ဖြစ်နေတာမျိုးတွေကို လျော့သွားစေချင်ရင် မှတ်ချင်တဲ့အရာတွေကို ခေါင်းထဲမှာ မှတ်သလို မှတ်စုထဲမှာသာ ရေးမှတ်လိုက်ရင် … Read more
Categories Careers, Knowledge Tags မေ့တတ်
ကိုယ့်မေတ္တာနဲ့ကိုယ် အေးချမ်းနေမှာပါ အနိုင်လို ချင်တဲ့ သူတွေကို ကျွန်တော် အမြဲ အရှုံးပေး ခဲ့တယ် အထက်စီ ကပဲ ဆက်ဆံချင် သူတွေကိုကျွန်တော် အမြဲ အောက်ကျို့ပေး ခဲ့တယ် ။ ဘဝင်မြင့်နေ တဲ့ သူတွေနဲ့တွေ့ရင်ကျွန်တော် အမြဲ ခေါင်းငုံ့ပေး ထားတယ် ။ လိမ်ညာ တက်သူတွေ နဲတွေ့ရင် မသိချင် ယောင်ဆောင် ပေးတယ် ။ အပြောသန်တဲ့ သူတွေနဲ့တွေ့ရင် ဆွံအ သလိုမျိုးေ နပေးလိုတ် တယ် ။ နားလည်မှု မရှိတဲ့ သူတစ် ချို့ကို တက်နိုင် သလောက်တော့ ရှင်းပြပေး တယ် ။ သစ္စာမရှိ တဲ့ လူတစ်ချို့ကို အကောင်းဆုံး လမ်းခွဲပေး လိုတ်တယ် ။ လူဆိုတာ … Read more
Categories Buddha Tags ကိုယ့်မေတ္တာနဲ့ကိုယ်
ဘယ်လို ရောဂါတွေကြောင့် ခြေဖျား၊ လက်ဖျားထုံကျဉ်ခြင်း ဖြစ်တတ်သလဲ။ ထုံကျင်ခြင်းသို့မဟုတ် အခြားပုံမှန်မဟုတ်သော ခံစားမှုများ၊ ထုံကျင်ခြင်းများ၊ ပစ္စည်းများ ကိုင်တွယ်ရာတွင် မြဲမြံစွာ မကိုင်နိုင်ပဲ လွတ်ကျခြင်း၊ အသေးစိတ် ပြုလုပ်ရသော အလုပ်များဖြစ်သော ကြယ်သီးတပ်ခြင်း၊ အဖုံးဖွင့်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရာတွင် ခက်ခဲခြင်းတို့သည် ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြောများနှင့် ပက်သက်သည့် ရောဂါ တစ်မျိုးမျိုးကို ညွှန်ပြနေသော လက္ခဏာဖြစ်ပါ ထုံကျင်မှုများသည် ခန္ဓာကိုယ်၏ မည်သည့် အစိတ်အပိုင်းတွင် မဆိုဖြစ်ပေါ်နိုင်၍ နေရာပေါ်မူတည်ပြီး ရောဂါ အမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်ပါသည်။ အဖြစ်များသော ထုံကျင်ခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်သည့် ခြေလက်ထုံကျင်ကိုက်ခဲချင်းအတွက်လိမ်းဆေးလေးဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် အ ရက် ဦးရေတစ်ပုလင်း တောရှောက်မြစ် ၊ရှောက်သီးခြမ်း ၊နနွင်း တက် ၊မိတ်သလင်ဥ ဆယ့်ငါးကျပ်သားစီရောပီးစိမ်ပါ ။ တစ်နေ့နှစ်ကြိမ်လိမ်းပါ လက်တွေ့ပျောက်၏။ တောရှောက်မြစ်ကို ခြမ်းထည့်ပါ ‎ဒေါ်ခင်မြင့်အောင်‎ … Read more
Categories Hearth Tags လက်ဖျားထုံကျဉ်ခြင်း
အသားေရမညီတာကို ေပ်ာက္ကင္းေစၿပီး အေရးအေၾကာင္းေတြကိုသက္သာေစတဲ့ စံပယ္ပန္း
May 30, 2020 by Nalonetar Diary
စံပယ်ပန်းလို့ ပြောလိုက်ရင် ဖြူဖြူဖွေးဖွေး မွှေးမွှေးလေးနဲ့ ပန်းလှလှလေးကို ပြေးမြင်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီ ပန်းလှလှလေးက ရနံလေးတင် မွှေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူး ရှိသလို အသားအရေ အတွက်လည်း အထောက်အကူပြုပေးပါတယ်။ စံပယ်ပန်း လှလှလေးတွေက အသားအရေကို ဘယ်လိုများ အထောက်အပံ့ ပေးသလဲဆိုတာကို ဒီဆောင်းလေးကနေ ပြောပြပေးမယ်နော်။ စံပယ်ပန်းမွှေးမွှေးလေး ကပေးတဲ့ အသားအရေ ကျန်းမာရေး အရောင်ဖွေးဖွေးလေးနဲ့ အနံ့မွှေးမွှေးလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အဆင်းရော အချင်းပါ ပြည့်စုံတဲ့ စံပယ်ပန်းလေးက အသားအရေအတွက် အခုလို ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ ဝက်ခြံတွေကို သက်သာစေနိုင်တယ် စံပယ်ပန်းက အရောင်ကျစေနိုင်တဲ့ အာနိသင် ရှိတာ​ကြောင့် ဝက်ခြံကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ စံပယ်ရွက်ကို ကြိတ်ခြေပြီး ရလာတဲ့ အနှစ်ထဲကို သံပုရာရည်ထည့်လို့ ဝက်ခြံဖြစ်တဲ့ နေရာပေါ်ကို လိမ်းကျံပေးရုံပါ။ ပြီးရင် … Read more
Categories Beauty Tags စံပယ်ပန်
ေရ အဓိ႒ာန္ ျပဳလုပ္ခ်င္သူေတြအတြက္ ေရ…အဓိိ႒ာန္ျပဳနည္း
ရေ…အဓိဋ္ဌာန် ဖန်ခွက်တစ်ခွက်တွင်ရေကိုဇွန်းနှင့်(၅၄)ဇွန်းထဲ့ပါ။ ပြီးနောက် လင်ဗန်းတစ်ချပ်ရဲ့အလယ်တည့်တည့်မှာဖန်ခွက်ကိုတင်ပါ။ ဘေးပတ်လည်မှာပန်း(၇)ပွင့်ဝိုင်းပါ။ မေမြို့…နှင်းဆီ..ဂန္ဓမာ..နေကြာ..သစ်ခွ ရွှေပန်း..ငွေပန်း..လင်ဗန်းပတ်လည်ဆီမီး(၉)ခွက်ပူဇော်(ထိုပန်းများမရပါကပန်း(၇)မျိူးပြည့်လျှင်ရပါသည်) ဘုရား(၇)ဆူပင့်ဖိတ်ပါ။ပူဇော်ကန်တော့.. ငါးပါးသီလခံယူ ဂုဏ်တော်(၂၇)ခေါက်ရွတ်ဖတ်မေတ္တာပို့(၃၁)ဘုံမေတ္တာပို့ပါ။ ဗုဒ္ဓံသရဏံ ဂစ္ဆာမိ အနိစ္စဒု့က္ခအနတ္တ(၃)ခေါက်ရွတ် ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ အနိစ္စ ဒု့က္ခအနတ္တ(၃)ခေါက်ရွတ် သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ အနိစ္စ ဒု့က္ခအနတ္တ(၃)ခေါက်ရွတ် ပြီးလျှင်မေတ္တာပြန်ပို့ပါ။ မေတ္တာသုတ်(၂၇)ခေါက်ရွတ်ဖတ်ပါ။ မိမိ မေတ္တာပို့လိုသူ၏ မျက်နှာ ကို ပေါ်လွင်အောင် ကြည့် ၍ မေတ္တာပို့ပါ။ လိုရာဆုတောင်းပါ။ မြတ်မို Zawgyi ေရ…အဓိ႒ာန္ ဖန္ခြက္တစ္ခြက္တြင္ေရကိုဇြန္းႏွင့္(၅၄)ဇြန္းထဲ့ပါ။ ၿပီးေနာက္ လင္ဗန္းတစ္ခ်ပ္ရဲ႕အလယ္တည့္တည့္မွာဖန္ခြက္ကိုတင္ပါ။ ေဘးပတ္လည္မွာပန္း(၇)ပြင့္ဝိုင္းပါ။ ေမၿမိဳ႕…ႏွင္းဆီ..ဂႏၶမာ..ေနၾကာ..သစ္ခြ ေ႐ႊပန္း..ေငြပန္း..လင္ဗန္းပတ္လည္ဆီမီး(၉)ခြက္ပူေဇာ္(ထိုပန္းမ်ားမရပါကပန္း(၇)မ်ိဴးျပည့္လွ်င္ရပါသည္) ဘုရား(၇)ဆူပင့္ဖိတ္ပါ။ပူေဇာ္ကန္ေတာ့.. ငါးပါးသီလခံယူ ဂုဏ္ေတာ္(၂၇)ေခါက္႐ြတ္ဖတ္ေမတၱာပို႔(၃၁)ဘုံေမတၱာပို႔ပါ။ ဗုဒၶံသရဏံ ဂစာၦမိ အနိစၥဒု႔ကၡအနတၱ(၃)ေခါက္႐ြတ္ ဓမၼံ သရဏံ ဂစာၦမိ အနိစၥ ဒု႔ကၡအနတၱ(၃)ေခါက္႐ြတ္ သံဃံ … Read more
Categories Buddha Tags ရေ…အဓိဋ္ဌာန်